Jabuuti iyo DP World iyo Casharka Berbera iyo Bossaso – Radio Daljir
Maarso 2, 2018 1:27 b 0
Shacabka, Dowladda iyo Xukuumadda Jabuuti ma aha kuwo la yareysan karo. Waa dowladda kaliya ee adduunka ka jirta oo laba saldhig ciidan oo iska soo horjeeda kala dajisey ciidamada Mareykanka iyo kuwa Shiinaha. Intaas kuma joojin Jabuuti ee waxa ay qarameysay Dekedda Dooraleh oo ay kal hore ka ijaartay shirkadda DP World oo ay leedahay Dowladda Dubai ee Isutagga Imaaraatka Carabta.
Dekedda Doraleh waxa ay wax ka yar 13 KM u jirtaa saldhigga ciidamada Mareykanka ee HOA.
Muddo ka badan 5 sano ayey Jabuuti waxa ay cabashooyin isdabajoog ah u gudbisay DP World iyo Dowladda Dubai, ayada oo ka cabaneysa in heshiiskii DP World aan sidii loo dhigay loo fulin, dowladda Imaaraadka Carabtuna ay Dekedda Doraleh u isticmaashey booscelis oo kaliya, ballaarinta Dooralehna aysan marnaba dhab ka aheyn.
DP World iyo Imaaraadku waa ay ku gacansayreen dhammaan cabashooyinkii dowladda Jabuuti. Sida aan ka helnay ilo wareedyo ku sugan Jabuuti, xaalku waxa uu gaaray in safiirka Imaaraadka u fadhiya Jabuuti uu feer ula tago Taliyaha Ciidamadda Cirka ee Jabuuti, taasna waxa ay dhalisay in si fiican loo kala boodo, safiirkii Imaaraadkana laga eryo Jabuuti.
Xiriir xumida iyo sida ay sheegeen saraakiil Jabuutiyiin ahi “isla weynida saraakiisha DP World iyo kuwa Imaaraadka Carabta” xaalkii waa sii cakirey, waxa ayna gaartay in maalinkii Jimcaha, 23kii Febraayo 2018, ay dowladda Jabuuti Qarameyso Dekedda Dooraleh oo DP World ay muddo ka badan 10 sano maamuleysay.
DP World ma ay aqbalin Qarameynta Jabuuti, waxa ayna ballanqaadey in ay Dowladda Jabuuti ka dacweyn doonto maxkamada ku taal London oo horey Dooraleh ugu xukuntay DP World.
Laakiin su’aashu maanta taagan baa ah, “maxay Soomaaliyi, siiba Berbera iyo Bossaso iyo maamulada Somaliland iyo Puntland, ka baran kaaraan waxa ka dhacay Dekedda Dooraleh iyo qalalaasaha maanta ka dhextaagan Dowladaha Jabuuti iyo Imaaraadka?”
Saddex casharba waa muhiim in maamulada Puntland iyo Somaliland maanka ku hayaan:
Alle waxa uu Soomaaliya ku beeray boos qaali ah, ahna kan laga soo galo Gacanka Cadmeed, ahna boos ay dhammaan dowladaha adduunku iyo kuwa leh maraakiibta qaadda konteenarada iyo qalabka saaranba, ay ka helaan boos ku yaal Badda Indiya oo ay konteenarada ku rogaan, si markaas konteenarada loogu kala raro mid walba meeshiisa, maraakiibta waaweyna aysan macno la’aan saf ugu jirin ama aysan meel cidla ah maalmo u fadhiyin. Ogaanshahaas waa u qaali Soomali oo dhan iyo maamuladeeda
Heshiis walba waxa uu tiir adag iyo fulin yeelan karaa markii uu heshiisku wato kalsooni si dhab ah u gorgortami karta, la raacsho qoraal dhab ah, faahfaahsan, tafaftiran, labada dhinac si dhab ah ugu daneeya (“waa baahanahay bakhti looma cuno”), uuna yahay mid la wada ogyahay, shacabka iyo siyaasiyiinta shacabka matala loo soo bandhigey (waa isla heshiiskaas maxkamad London ku taal qareen iyo damaanad looga dhigey), aragtida shacabka laga dhergo, deedna la isla ogolaado.
Waa in heshiiska la isla ogolaaday loo saaro guddi isugu jira miidda bulshada iyo dowladda oo hubiya in heshiisku u fulo sidii iyo waqtigii loogu talagaley, haddii uu u fuli waayana meelmariya ganaax markii horeba lagu xusay heshiiska lagu gaaray qodobka labaad ee kore
Wixii intaas ka baxsan waa shacabka oo sida awr dhaansan loo dareersado, laakiin awrtuba waa tan didda markii ay shakido deedna beylah noqota oo dhaankaba daadisa, sida Dekedda Dooraleh.
Ugu danbeyn sida ay Radio Daljir la qabsadeen saraakiil sare oo DFS, Dowladda Federaalku waa ay ciyaartey doorkeedii heshiiska DP World (haah oo waa uga sii dhawaan kartey), laakiin in heshiisku noqdo mid matala danta dhow iyo tan fog ee Soomaaliya iyo maamulada Soomaalida, waa sida ay nala qaybsadeen isla saraakiishaas, waa mid u taal labada maamul oo shacabkooda la tashanaya, si aan loo eersan DFS, looguna eedeyn in ay ka soo horjeeddo hormarka maamulada dalka.
Saas oo ay tahay, sida aan ka baraneyno Dekedda Dooraleh “waa baahanahay bakhti looma cuno,” danta fog ee Soomaaliya iyo tan Berbera iyo Bossaso ayana waxa ay ku jirtaa heshiisyada DP World oo shacabka loo soo bandhigo, wixii qaldameyna la saxo, waa inta goori goor tahay.
>>> **************************************** <<<
Hoos arag wararkii ugu danbeeyey ee Dekedda Berbera iyo Itoobiya oo Berbera ku yeelatay saami dhan 19% meesha Somaliland ka heshay 30%, DP World ayana ay qaadatay 51%.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 388 Wararka 12127